XM Group မှ Forex ပွဲစားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | ဘယ်လိုအသုံးပြုနည်း XM ထရေးဒင်းများအတွက် platform - က ISO
"Access ကို Unlimited ဗီဒီယိုကျူတိုရီရယ်"
အခုတော့ XM.com သွားရောက်ကြည့်ရှု
XM အုပ်စုတစုသို့မဟုတ် XM.com ကုန်သွယ်ရိုးရှင်းတွေ့ဆုံရှိရာသာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်လွှအေးဂျင့်တစ်ဦးကမိုဘိုင်းကွန်ရက်များနှင့်အရောင်းအမူတည်ပြီးမှစွမ်းရည်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, XM သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု amalgamate နှင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောအမြတ်အဘို့ထိုသူတို့တွန်းအားပေးဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
သငျသညျ features အဘယ်အရာကိုအံ့သြစေခြင်းငှါ XM အုပ်စုတစုကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်, ဘယ်လိုတခြားပလက်ဖောင်းထက် သာ. ကောင်း၏, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အပေါငျးတို့သအကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှင်းပြဖို့စေ့စေ့စပ်စပ်စာရင်းပြုစုခဲ့ကြ XM သငျသညျပိုကောင်းသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချအတွက်အသိပေးဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ XM ၏မူလဘာတွေလုပ်နေလဲ? ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အောက်က Read!
ပိုပြီးထို့နောက် 1,000,000 ကုန်သည်များကအသိမှတ်ပြု
clients Forex ကုန်သွယ်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။
အကောင့်တခုဖွင်, အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်အပြည့်အဝ-Service ကို Creating?
MetaTrader4နှင့် MetaTrader 5
XM ကုန်သွယ် app ကို
XM Group မှစေ့စပ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးအွန်လိုင်းပွဲစားများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါဝင်သည်။ XM.com က၎င်း၏ client များ MetaQuotes အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောတစ်ခုလုံးကို MetaTrader ပလက်ဖောင်း suite ကိုပေးသည်။
XM.com လျင်မြန်စွာ 400 ငွေကြေးအားလုံးပါဝင်သော 57 အာမခံနှင့်တူရိယာကျော်ကမ်းလှမ်းသည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အွန်လိုင်း Multi-ပိုင်ဆိုင်မှုအရစ်ကျသို့တိုးတက်နှင့် 356 CFDs ကဲ့သို့အများအပြားသိရသည်။ Bitcoin, ဂယက်ထ, Litecoin နှင့် Ethereum: cryptocurrencies အပေါ်ရရှိနိုင်5CFDs လည်းကြီးမားသောဒင်္ဂါးပြားဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပူဇော်ကြသည်။
developer များ XM ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ဒါမှမဟုတ် XM Group မှ, ထရေးဒင်းပွိုင့် Holdings Ltd အောက်မှာကုန်သွယ်မှုသောနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: ထရေးဒင်းဆုကြေးငွေများနှင့်သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ, Ltd နှင့်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဗြိတိန် Ltd ၏ထရေးဒင်းပွိုင့်၏ထရေးဒင်းပွိုင့်အောက်တွင်မှတ်ပုံတင် client များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမဟုတ်
XM အုပ်စုတစ်စုအွန်လိုင်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပွဲစား၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ, Ltd ၏ထရေးဒင်းပွိုင့် 2009 အတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် CySEC လိုင်စင်နံပါတ် 120 / 10 အတူ။
ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ Pty Ltd မှထရေးဒင်းပွိုင့် 2015 အတွက်သြစတြေးလျ၌တည်ခဲ့လိုင်စင်နံပါတ် 443670 နှင့်အတူ ASIC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဗြိတိန်, Ltd ၏ထရေးဒင်းပွိုင့် 2016 အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်နှင့်လိုင်စင်နံပါတ် 705428 အတူ FCA နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
ရှိပါတယ် 1,000,000 clients များကျော် ကြောင်းယုံကြည်မှုနှင့်ကျော်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းကိုအသုံး 150,000,000 အရောင်းအကွပ်မျက်ခံရ။
XM , တုပယ်ချသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှု requoted ပြီးလျှင်ဘယ်တော့မှမသူ့ဟာသူပေါ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Forex ပွဲစားသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ XM မှာသူတို့ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအများအပြား scam များနဲ့လှည့်ကွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နားလည် XM သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့နဲ့ကောင်းစွာကာကွယ်ပေးသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်သော site ကို, ForexBrokers.com ထံမှ ratings အဆိုအရကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အကြီးဆုံးဘက်မလိုက်စည်းမျဉ်းဒေတာဘေ့စထိန်းသိမ်းထားသည်။ နှစ်ဆယ်ရှစ်အရေးကြီးသော variable တွေကိုသုံးပြီး Created သူတို့က "Trust မှရမှတ်" အမည်ရှိကြပြီ trusty နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့စံ၏တစ်ဦးတည်းပိုင်နှင့်ဘက်မလိုက် 1-100 ရမှတ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။
XM.com ၏သတိထားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်ကျနော်တို့ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ, မွံ, ဂုဏ်သတင်း, ပလက်ဖောင်း, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့တခြား features နဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများမှာကြည့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့ကအရစ်ကျ 71 ၏ 100 တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ယုံကြည်မှုရမှတ်ပေးပြီ။
XM အုပ်စုတစ်စုအွန်လိုင်းကုန်စည်ကုန်သွယ်များအတွက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အကောင်းဆုံးပွဲစားတဦးသည်နှင့် Forex အရာဆင်းသက်လာ CFDs, ကုန်သွယ် Forex အသစ်-အသက်အရွယ် features တွေတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ကမ်းလှမ်း Equity, CFDs, Commodities, စတော့အိတ် CFDs, အဖိုးတန်သတ္တုများအဘို့အ CFDs, cryptocurrencies များအတွက်စွမ်းအင်နှင့် CFDs များအတွက် CFDs indices ။
ဘာဖြစ်တာလဲ XM ရှေ့ဆက်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကောင်တာ Re-ကိုးကားသို့မဟုတ်မည်သည့်ကုန်သွယ်အမိန့်များထုတ်ဝေမှုကိုအငြင်းမျှသည်အခြားဖျောအခကြေးငွေနှင့်ကော်မရှင်များရှိပါတယ်ကြောင်း ချက်ချင်းကွပ်မျက်ခံရသည်ဟုအမိန့်များ 99.35 ကျော်% မြင့်မားခွင့်ပြုချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သင်သည်သင်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအကောင်းဆုံးဖြည့်စျေးနှုန်းအာမခံ။
XM Group မှသြဇာအဖွဲ့အားလုံးအီးယူစညျးမဉျြးစညျးကမျးအဖွဲ့အစည်းများသက်ဆိုင်သည်။ သြဇာက၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကုန်သွယ်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထက်ပိုမို 60 Forex ငွေကြေးအားလုံးနှင့်ပိုမိုထက်တရာဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတက်ကြွစွာ 8 အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်အပြင်နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်ရုံထွက် စတင်. , ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝါရင့်ကုန်သည်ဖြစ်ကြ၏ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကုန်သည်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများ equivocally မသက်ဆိုင် full-service ကိုအကောင့်ဖြစ်ခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် paper- ၏, State-Of-The-Art န်ဆောင်မှုမှအကျိုးကိုလည်းတန်းတူညီမျှကုန်သွယ်အခြေအနေများကနေလို့ရပါတယ် ကုန်သွယ်သရုပ်ပြအကောင့်။
quick မှတ်ပုံတင်ခြင်းတဆယ်ခုနစ်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်အလွယ်တကူရရှိနိုင်နှင့်ကုန်သွယ်များအတွက် Micro နှင့်နျ Standard အကောင့်များနှင့် $5များအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 100 သာနိမ့်ဆုံးသိုက်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါတယ် XM သုညအကောင့်, ဒါမှမဟုတ်တနည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 100,000 အလေ့အကျင့်ခရက်ဒစ်နှင့်အတူငွေကြေးထောက်ပံ့ကြောင်း non-ကုန်ဆုံးမည့်သရုပ်ပြအကောင့်ပေါ်မှာ။
clients ကိုလည်းအဓိကငွေကြေးအားလုံးအပေါ်0pips သကဲ့သို့အနိမ့်စေနိုင်သည်ဖြစ်သော tightest န့်ကနေအကြိုးခံစားနိုင်ကြသည်။
အောက်ပါအခြေခံငွေကြေး options များနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ကုန်သွယ်ခြွင်းချက်အမိန့်များနှင့်ပေါ်ဖြစ်ပေါ် Donning:
Zar, စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်, RUB, PLN, HUF, AUD, CHF, JPY, ပေါင်, EUR, အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ပေးထားသောအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးတွေအများကြီးထဲမှာ 1,000 ယူနစ်ရှိသည်သောက၎င်း၏မိုက်ခရိုစာရေးဘို့အမည်ရှိ Micro အကောင့်) တစ်ဦး
ပူးတှဲပါအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးတွေအများကြီးထဲမှာ 100,000 ယူနစ်ရှိသည်သောက၎င်း၏စံစာရေးဘို့အမည်ရှိ Standard အကောင့်,) ကို tightest န့်များအတွက်အမည်ရှိ ZERO အကောင့်ပင်0pips အထိတစ်သုညအကောင့်ကုန်သွယ်တိုင်း $ 3,5 များအတွက် $ 100,000 ကော်မရှင်ငွေပမာဏရှိသည်။
Forex ငွေကြေးထက်ပို 60 အားလုံးအပေါ် tightest န်နှင့်တကွ, သုညအကောင့်အတွက်ပြန့်ပွား Micro နဲ့အဘို့အ 1 နှင့်လည်းနျ Standard အကောင့်သကဲ့သို့အနိမ့်ရောက်ရှိနိုင်ပြီး, နိမ့်ဆုံးန့်ချဉ်းကပ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်0မှာ။
XM client များအများကြီးတင်းကျပ်တဲ့န့်နှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တတ်နိုင်သမျှကိုးကား, အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်အလွန်အရေးကြီးပါမှအကျိုးနိုင်သည့်ဒဿမကိန်းစျေးနှုန်းများ၏ပံ့ပိုးပေး (pips) လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၏ clients XM ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးအနည်းကိန်းအကောင့်ကို အသုံးပြု. အားလုံးလက်လှမ်းသောအမျိုးမျိုးသောအမိန့်ကန့်သတ်အပါအဝင်အမျိုးအစားများ, ရပ်တန့်, စျေးကွက်နှင့်ကပ်တွယ်မှုကိုအမိန့်ကိုထောက်ပံ့သောတဆယ်ခြောက်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, အထိ အသုံးပြု. အားလုံးကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုများအရှိန်မြှင့်ကြီးသားအပေါင်းတို့, ကုန်သည်များကြီးမားတဲ့ mobility ပေးခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကုန်သွယ်မှုနိုင်ကြသည် သူတို့ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြန်နှုန်းနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်တကွ, နေ့၏ခပ်သိမ်းသောကာလ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကုန်သွယ်မှု။
XM မှာအမည်စာရင်းတင်သွင်း-ပေါင်းစုံနဲ့ဆုရ Metatrader4ပလက်ဖောင်းသုံးစွဲသူများကကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ (ကွက်) သင်လမ်းတိုင်းခြေလှမ်း supporting တွေနဲ့ full-service နှင့်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်က operate ပေးနိုင်ပါတယ်။
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီသင်ကုန်သွယ်လေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်များတွင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန် full-service ကိုအကောင့်နဲ့စတင်ချင်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အသစ်ကကုန်သည်တွေ, ကြှနျုပျတို့အမြဲစက္ကူကုန်သွယ်သရုပ်ပြ Forex အကောင့်နှင့်အတူစတင်အကြံပြုပါသည်။ ဤသည်ကုန်သွယ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုသေချာနှင့်တစ်သမတ်တည်းအသားတင်-အမြတ်အစွန်းအရောင်းလုပ်နေပါတယ်တိုင်အောင် full-service ကိုအကောင့်ဖွင့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
သင်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ဖို့ကို virtual ပိုက်ဆံအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 100,000 နဲ့ Demo အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ထရေးဒင်းဆုကြေးငွေဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ, Ltd နှင့်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဗြိတိန် Ltd ၏ထရေးဒင်းပွိုင့်၏ထရေးဒင်းပွိုင့်အောက်တွင်မှတ်ပုံတင် client များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမဟုတ်
မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပလက်ဖောင်းလိုင်း-up, XM မသာအထင်ကြီးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းအများအပြားရွေးချယ်မှုပေးပါသည်:
MT4 Mac အတွက် Web ကိုထရေးဒင်းက iPhone Trader အိုင်ပက် Trader Droid Trader နှင့်အခြားမိုဘိုင်းကုန်သည်ကြီးများများအတွက်ရရှိနိုင် terminal MT5 အဆိုပါ MT4 XM Group မှကွက် (ကျွမ်းကျင်အကြံပေး) ၏တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအသင်းကထောက်ခံကြသည်အကောင့်ကုန်သည်များနှင့် client များအများအပြားရှိပါတယ် XM စံရာပူဇော်သက္ကာ MetaTrader သာပွဲစားဖြစ်ပါသည်, Out-of-the-box ကိုအတွေ့အကြုံကို။
ဒါဟာ MetaQuotes ဆော့ဝဲကော်ပိုရေးရှင်း, Desktop, မိုဘိုင်းနှင့်ဝက်ဘ်များအတွက်ရေပန်းစား MT4 နှင့် MT5 ပလက်ဖောင်း၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူထံမှပလက်ဖောင်းများ၏ suite ကိုကမ်းလှမ်းဆိုလိုသည်။
MetaTrader4နှင့် MetaTrader5စံလာနေစဉ်, ပွဲစားကနေပွဲစားမှလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်နည်းနည်းအပြောင်းအလဲနှင့်အတူ, အမျိုးမျိုးသောတင်းကျပ်စွာန့်နှင့်အခြားကော်မရှင်, ကွပ်မျက်နှင့်အခြားကိရိယာများ, အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းအထိသတ်မှတ်လမျး၌သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိနိုင်ပါတယ် ဒေသများ။
အဆိုပါ MT4 နှင့် MT5 နှစ်ဦးစလုံးကမ်းလှမ်းတဲ့တင်းကြပ်စွာစညျးမဉျြးစညျးကမျး MetaTrader ပွဲစားရှာနေဖြစ်ကြောင်းကုန်သည်များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုရွေးချယ်ရာတွင်နေကြတယ် XM ယင်း၏သုညအကောင့်မှာများစွာသောစျေးကွက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်း၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုအဘို့။ ပေမဲ့ XM ငါး cryptocurrencies အပေါ်ငါးဆယ်ခုနစ်ငွေကြေးအားလုံးနှင့် CFDs ပါဝင်သောထက်ပိုလေးရာတူရိယာ, ကမ်းလှမ်းခြင်း, ပွဲစားနေဆဲတထောင်အများအပြားတူရိယာပူဇော်သူကိုပွဲစားနောက်ကွယ်မှလူ့။
ဟုတ်ပါတယ်, မိုဘိုင်းထရေးဒင်းရှိ! မှစ. XM တစ်ဦး MetaTrader သာပွဲစားဖြစ်ပါသည်, ထိုကို iOS နှင့် MT4 နှင့် MT5 မိုဘိုင်း apps များ၏အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းများအသီးသီးစံ လာ. ထိုနှစ်မျိုးလုံးကို Apple iTunes ကိုစတိုးဆိုင်နှင့် Android Play စတိုးကနေ download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သူတို့ကသူတို့ကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကောင့်ချိန်ခွင်လျှာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လျော့နည်းစိုးရိမ်စိတ်များတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှိကုန်သည်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာချိန်ခွင်လျှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆက်ကပ်။ စျေးကွက်သေဒဏ်စီရင်သောမူဝါဒအောင်အမြန်အဆိုပါတင်းကြပ်နှင့် Real-time သုံးပြီးအဘယ်သူမျှမ requotes နှင့်မျှမတို့နောက်ထပ်ဝှက်ထားအခကြေးငွေသို့မဟုတ်ကော်မရှင်များမူဝါဒ, coupled XM အများဆုံးကောင်းစွာလေးစားဖွယ်နှင့်ဆည်းကပ်-ပြီးနောက် Forex ပွဲစားများအကြားရာထူး။
၎င်းတို့၏ကုန်သည်များအကြီးအကျယ်မြန်ဆန်ထိုအရပ်မှအကြိုးပွုနိုငျ XM အရောင်းအ Re-ကိုးကား, ဝှက်ထားသောအဖိုးအခများသို့မဟုတ်အခြားဖျောကော်မရှင်နှင့်အတူတန်ပြန်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်လိုအပ်နေမကုန်သွယ်ဝန်ဆောင်မှု။
ဤကြီးစွာသောအကျိုးခံစားခွင့်လုပ်ရသောတင်းကြပ် Real-time စျေးကွက်ကွပ်မျက်မူဝါဒများနှင့်အတူဒွန်တွဲနေကြတယ် XM အမြင့်ဆုံး, အများဆုံးဂုဏ်သတင်းနှင့်လည်းအများဆုံးရှာကြပြီးနောက်, ငွေကြေးနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုပွဲစားများအကြားရာထူး။
သင့်အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ထုတ်ယူအလုပ်လုပ်ရက် 24 နာရီနှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌ခံရအတူရရှိနိုင်ပါသည်7/ 24 ဖြစ်ပါသည်သည့်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စသည်တို့ကိုမြီ / ခရက်ဒစ်ကဒ်များ, Skrill, Neteller, ဘဏ်ကြေးနန်းလွှဲပြောင်းအပါအဝင်: ကုန်သည်ကြီးများကျယ်ပြန့်ပထဝီလွှမ်းခြုံနှင့်အတူ, သင့်စတိုင်နှင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက်မှန်ကန်သောဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာကနေအကြိုးပွုနိုငျ
XM မကြာသေးမီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကမ္ဘာအနှံ့ငါးဆယ်ရှစ်နိုင်ငံများတွင်နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာဒေသခံငွေကြေးရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒေသခံဘဏ်များကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏အကောင့်ရန်ပုံငွေချနိုင်မှဖွရသောဒေသခံဘဏ်ငွေလွှဲ option ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
အားလုံးလွှဲပြောင်းအခကြေးငွေ XM အားဖြင့် 100% ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်အဖြစ်ရှိလွှဲပြောင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ပုံငွေများအတွက်သုညဝှက်ထားသောအဖိုးအခများသို့မဟုတ်အခြားကော်မရှင်လုံးဝဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လွယ်ကူသောငြိမ်ဝပ်စွာနေ။
ဒါကဆုရဝန်ဆောင်မှုလိုက်ဖက်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်သူတို့သာကုန်သွယ်မဟုတ်ဘဲအခကြေးငွေ, လွှဲပြောင်းနှင့်အခြား brokerage ဒဏျခတျမယ်လို့သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပျကွောငျးစိတ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးပေးသည်မရနိုင်ပါ။
စစ်ဆင်ရေး၏အဲဒီမှာ 14 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ 24 နာရီတစ်ရက်ကူညီ,5ဘာသာစကားများကျော်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ချက်တင်ကနေတဆင့်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုနှင့်သရုပ်ပြအကောင့်အမျိုးအစားတွေကို, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတယ်လီဖုန်းအဖြစ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်အခြားအနညျးလမျးနှစ်ဦးစလုံးမှာစိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေး။
"နေ့စဉ် Forex webinars မှအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်"
At XM ကုန်သွယ်မှုသူတို့က client များ '' ပညာရေးဂရုစိုက်နှင့်ကစားသောလယ်အခုလဲနှင့်အချိန်ပဲတိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွက် seasoned ပညာရှင်များသို့ပင်သူတို့အားအစပြုသူကုန်သည်များအောင်တတ်နိုင်သမျှအသိပေးအဖြစ်သူတို့ကိုဖြစ်ချင်တယ်။
XM ရဲ့သုတေသနပူဇော်သက္ကာကိုနေ့စဉ်ဈေးကွက်ပြန်လည်စုစည်းမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအပါအဝင်လေ့လာသုံးသပ်သူများကတစ်ဦးအတွက်အိမ်သူအိမ်သားအဖွဲ့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအများစုပါဝင်သည်။ ယခင်နှစ်ကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်, XM အုပ်စုတစ်စုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူစျေးကွက်ဖုံးအုပ်ထဲမှာအိမျကိုပိုမိုသုံးသပ်သူများ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူ၎င်း၏သုတေသနပူဇော်သက္ကာကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ငွေရတတ်သောသူနှင့်ကျယ်ပြန့် Forex ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းထူးခြားအခမဲ့အပတ်စဉ်နှင့်အပြန်အလှန် webinars သုံးပြီးတိုင်း client များ '' လက်ချောင်းထိပ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ် (အခမဲ့) ကိုဗီဒီယိုအဖြစ် MT5 နှင့် MT4 လဲ tutorial ဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသား။
ယင်း၏ဘာသာပေါင်းစုံစီးပွားရေးပြက္ခဒိန်ကြိုးစားပါအဖြစ်ပေး Forex သတင်းနှင့်စျေးကွက်ဆန်းစစ်အစီရင်ခံစာများ, XM ဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်သူများက။ XM အညီသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာလေ့လာသင်ယူနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချနိုင်မှဈေးကွက်အပြောင်းအလဲများအတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်အသိအမှတ်မပြုရန်၎င်း၏ client များကူညီပေးသည်။
မှာဝန်ထမ်းများက XM (alias ကို: ထရေးဒင်းပွိုင့်) နဲ့သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မေးခွန်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကျေနပ်ဖို့အပြည့်အဝတာဝန်ယူဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ XM ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလျင်မြန်စွာအင်တာနက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်က်ဘ်ဆိုက်များကနေတစ်ဆင့်ယင်း၏ကျေနပ်မှု clients များ မှစ. , ယုံကြည်မှုစကေးပေါ်တွင် "7 ထဲက 10" အတွင်း rated ခံရ, အလွန်အဆင်သင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏လကျအောကျခံခြင်းဖြင့်သက်သေသောယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်ဆင့်, အတိတ်ငွိမျး။
0: 1 Pips ထံမှအီးယူနေရာမှာလည်းပြံ့နှံ့ 30 မှတက် Flexible သြဇာ options များအတွက်လိုင်စင်
တစ်ဦးကကော်မရှင်နာတာဝန်ခံကျွန်တော်တို့ရဲ့သုညအကောင့်အမျိုးအစားတွေကို $ 30 ကြိုဆိုအပိုဆု, $ 5,000 (စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို apply) ထိဝေါဟာရများမှရရှိနိုင်
real-time 24 နာရီပံ့ပိုးမှု
အဆိုပါအစီရင်ခံကော်မရှင်နှင့်အခြားအဖိုးအခမှာ XM Group မှမရရှိနိုင်အကောင့်များ၏တိကျသောအမျိုးအစားမှစပ်ဆိုင်သောအ။
သုံးကော်မရှင်-အခမဲ့နျ Standard နှင့် Micro အကောင့်များပါဝင်သည်ထားတဲ့စာရင်းအကောင့်များနှင့်ကော်မရှင်နာသုညအကောင့်အမျိုးအစားရှိပါတယ်။
ယင်းသုညအကောင့်အမျိုးအစားများတွင် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်ပျမ်းမျှပျံ့နှံ့ကော်မရှင်တို့ပါဝင်သည်ဟူသော 0.1 pips အဖြစ်စာရင်းသွင်းသည်သုည-commision Micro နှင့်နျ Standard အကောင့်နှိုင်းယှဉ်, တခြားအကောင့်အမျိုးအစားထဲမှာအတူတူအားလုံးအတှကျ 1.7 pips ပျမ်းမျှပြန့်ပွားခဲ့သော ။
ကျနော်တို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 3.5 ကော်မရှင် ($7နှုန်းတစ်ဦးအနေအထားဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဖို့ရန်), နှင့် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ် 0.1 pips ၏ပျမ်းမျှပျံ့နှံ့ပါဝင်သည်ပြီးတာနဲ့ကုန်သွယ်မှုတပြင်လုံးကိုကုန်ကျအတော်လေး 1.1 pips (0.1 ပြန့်ပွား + 1.0 ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲဖြစ်ပါသည် ယင်းသုညစေရာကော်မရှင်နာအရောင်း), ကုမ္ပဏီဖွင့်အများဆုံးထိထိရောက်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာပူဇော်သက္ကာဘို့အကောင့်။
ဒါဟာသတိပြုပါရန်ခြောရကျိုးနပ်သည် XM Group မှကွပ်မျက်ခံရဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏အရောင်းအပေါငျးတို့သထဲမှာတစ်ဦးတည်းသောကျောင်းအုပ်ကြီးကုန်သည်အဖြစ်ပြုမူ, သူတို့သည်အဘယ်သူမျှမ Re-ကိုးကားတဲ့ကုန်သည်သို့မဟုတ်စျေးကွက်-ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အမိန့်သရုပ်ဆောင်နှင့်ကွပ်မျက်အားလုံးအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်သောမှတစ်ဆင့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆက်ကပ်။
ဤသည်ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ခွင့်ပြု XM တိကျတဲ့စျေးကွက်အခြေအနေများအောက်တွင်နိမ့်နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တင်းကျပ်စွာန့်ကမ်းလှမ်းရန်အုပ်စုသည်။ အနှစ်ချုပ်ရန်, နှစ်ဦးစလုံးရှိနိုင်ပါအကောင့် option အမျိုးအစားများကို client များ '' လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးအသုံးဝင်ပါသည်။
"Highly ဘို့အကြံပြု XM ကုန်သွယ်ရေး "
XM တစ်ခုချင်းစီကို client ကိုဆိုင်းငံ့အမိန့်များအပါအဝင်တစ်ကြိမ်ရာထူး 200 အထိကျင်းပရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကုမ္ပဏီကိုလည်းစျေးကွက်အတွက်တစ်အချိန်တွင်စံစာရေး (ငါးသန်းယူနစ်) 50 အထိဖြည့်ပါရပ်တန့်-ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကန့်သတ်အမိန့်များနှင့်အရောင်းအနေရာလိုသောကုန်သည်များကဖုန်းကုန်သွယ်ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။
XM client များကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ယဇ်နှင့်ဆိုင်းအပ်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုသတင်းအချက်အလက်သင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်ရသောပုံမှန်အစည်းအဝေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲ, ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
2017 ခုနှစ်, XM အုပ်စုတစ်စုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များအခြေခံပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိတွေ့ရရှိနိုင်စွမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, Bitcoin (BTCUSD), Bitcoin (BCHUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD) နှင့်ဂယက်ထ (XRPUSD) အပါအဝင်အဓိက cryptocurrencies အပေါ် CFDs စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Tags: အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစား XM, XM Forex အခမဲ့, XM Forex ဘာလဲ, XM ပွဲစား Forex, XM Forex, XM Forex ဆုကြေးငွေ, XM Forex ပွဲစား, XM Forex ပွဲစားဆုကြေးငွေ, XM Forex ပွဲစားစည်းမျဉ်း, XM Forex ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်, XM Forex ရဲ့ login, XM Forex ပြန်လည်သုံးသပ်, XM Forex ကုန်သွယ်, XM Forex ကုန်သွယ်အကျိုးဆောင်, XM ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Created: အောက်တိုဘာလ 11, 2018